Ibhange lokudla laseNew Jersey lithola umnikelo wama-solar angu-33-kW ophahleni lwelanga
IFlemington Area Food Pantry, ekhonza eHunterdon County, eNew Jersey, ibungaze futhi yethula ukufakwa kwayo okusha kwelanga ngokusika iribhoni ngoNovemba 18 eFlemington Area Food Pantry.
Le phrojekthi yenziwe yenziwa ngumzamo wokubambisana phakathi kwabaholi abaziwayo bezimboni zelanga kanye namavolontiya omphakathi, ngamunye ehlinzeka ngezinto zawo.
Phakathi kwawo wonke amaqembu abambe iqhaza ekwenzeni lokhu kufakwa kube ngokoqobo, iphenti linezinto ezizolibonga ngokukhethekile - umfundi waseNorth Hunterdon High School, u-Evan Kuster.
"Njengevolontiya eFood Pantry, ngangazi ukuthi babenezindleko ezinkulu zikagesi eziqandisini zabo nasemakhazeni futhi ngicabanga ukuthi amandla elanga angonga isabelomali sabo," kuhlanganyela uKuster, umfundi waseNorth Hunterdon High School, Class of 2022. Ubaba usebenza enkampanini ethuthukisa amandla elanga ebizwa ngeMerit SI, waphakamisa ukuthi sicela iminikelo yokuxhasa lolu hlelo. ”
Ngakho-ke abakwaKusters babuza, futhi abaholi bezimboni zelanga baphendula. Ukuqoqa umbono wabo womthelela, isisekelo esigcwele sabalingani bephrojekthi kufaka phakathi iFirst Solar, i-OMCO Solar, iSMA America kanye nePro Circuit Contracting contract esayinwe kule phrojekthi. Ngokubambisana, banikele ngokufakelwa kwelanga okuphelele kwi-pantry, behlisa isikweletu sikagesi saminyaka yonke esingu- $ 10,556 (2019). Manje, uhlelo olusha lwama-33-kW luvumela lezo zimali ukuthi zabelwe ukuthenga ukudla komphakathi wabo - okwanele ukulungiselela ukudla okungu-6,360.
UJeannine Gorman, umqondisi omkhulu weFlemington Area Food Pantry, ugcizelele ubunzima bale mpahla entsha. "Idola ngalinye esilisebenzisa ekukhokheni kwethu ugesi lincane kunedola elilodwa esingalisebenzisa ekudleni komphakathi," kusho uGorman. “Sifeza umsebenzi wethu nsuku zonke; kuyasikhuthaza kakhulu ukwazi ukuthi ochwepheshe banakekela ngokwanele ukunikela ngesikhathi sabo, ithalente nezinto zabo ukusisiza ukuthi siqhubeke nokusiza izidingo zomphakathi wethu. ”
Lokhu kukhonjiswa kokupha bekungeke kube yisikhathi, kunikezwe umthelela owonakalisayo wobhubhane lwe-COVID-19. Phakathi kukaMashi noMeyi, bekukhona ababhalisile abasha abayi-400 endaweni yokugcina izimpahla, kwathi ezinyangeni eziyisithupha zokuqala zonyaka, babona ukwanda kwamakhasimende abo okungu-30%. Ngokusho kukaGorman, “ukuphelelwa yithemba ebusweni bemindeni njengoba kuye kwadingeka ukuthi bacele usizo” kube ubufakazi bokuthi lolu bhubhane lube nomthelela okhubazekile, lwelula abaningi emazingeni okudinga ababengakaze babhekane nalo ngaphambili.
UTom Kuster, isikhulu esiphezulu seMerit SI noyise ka-Evan, bebeziqhenya ngokuhola lo msebenzi. "Ukubhekana nalolu bhubhane lomhlaba wonke ngokungangabazeki bekusabisa kubo bonke abantu baseMelika, kodwa bekunzima kakhulu emiphakathini enganakiwe futhi esengozini," kusho uKuster. "E-Merit SI, sikholelwa ekutheni indima yethu njengezakhamizi ukubamba iqhaza futhi sinikeze usizo lapho kunesidingo khona."
IMerit SI ihlinzekele ukwakhiwa kwengqalasizinda nobunjiniyela, kodwa futhi yasebenza njengomxhumanisi, yaletha abadlali abaningi ababalulekile ukwenza lokho kwenzeke. “Sibonga kakhulu kozakwethu ngokunikela ngesikhathi sabo, ubuchwepheshe, kanye nezixazululo zalo msebenzi, ozosiza kakhulu lo mphakathi ngaleli thuna nesikhathi esingakaze sibonwe,” kusho uKuster.
Amamojula elanga aphambili amafilimu amancane anikelwe yiFirst Solar. I-OMCO Solar, i-OEM yomphakathi kanye nezinsizakusebenza ze-tracker yelanga nezixazululo ze-racking, ifake uhlu lwamaphaneli. ISMA Melika inikele ngeSunny Tripower CORE1 inverter.
IPro Circuit Electrical Contracting ifake i-array, yanikela ngawo wonke umsebenzi kagesi nowejwayelekile.
"Ngiyamangala ngakho konke ukusebenzisana phakathi kwezinkampani eziningi ezizinikele kulo msebenzi… Ngifuna ukubonga bonke abaxhasi, kanye nabantu abenze lokhu kwaba nokwenzeka," kusho u-Evan Kuster. "Kube wukukhanya okuhle kithi sonke ukusiza omakhelwane bethu ngenkathi sithatha imithelela yokuguquka kwesimo sezulu."